ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): ညဘက်မှာ ရေချိုးရင် ဘာတွေဖြစ် လာနိုင်သလဲ? ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): ညဘက်မှာ ရေချိုးရင် ဘာတွေဖြစ် လာနိုင်သလဲ?
ညဘက်မှာ ရေချိုးရင် ဘာတွေဖြစ် လာနိုင်သလဲ?
လူတိုင်း လိုလို ကိုယ်ခန္ဓာ နုပျို လန်းဆန်းနေ တာကို အလိုရှိ ကြပါတယ်။ ရေချိုးခြင်း ဟာလဲ ခန္ဓာကိုယ် လန်းဆန်း သွားအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း ထဲမှ တမျိုး အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညဖက်ပိုင်းမှာ ရေချိုးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ် သလား ဆိုတာကို လေ့လာကြည့် ရအောင်ပါ။
ရေချိုးခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာ အပန်းပြေ သွားအောင် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင် ပေးနိုင် ပါတယ်။ တစ်နေကုန် အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပင်ပန်းလာခဲ့တဲ့ အတွက် ညနေဖက်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပန်းပြေ သွားအောင် ရေချိုးပေး သင့်ပါတယ်။
ညပိုင်းမှာ ရေချိုးမှုနဲ့ ပက်သက်လို့ အယူအဆ ကွဲလွဲမှုတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ တချို့လူတွေက ဒီလိုရေချိုးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာကို ထိခိုက်စေမယ်။ ဖျားနာမှုနဲ့ ရောဂါတွေ ရရှိနိုင် မယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ပညာရှင်များကတော့ ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်သလားဆိုရဲ့ အဖြေကတော့ “နိုး(NO)” တစ်လုံးထဲပါတဲ့။ ညဖက်မှာရေချိုးလိုက်လို့ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ သိပံ္ပနည်းကျ အထောက် အထားများ မတွေ့ရှိရဖူးလို့ ပြောပါတယ်။
တနေကုန်ပင်ပန်း လာပြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရင်တောင် တောင့်တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေဟာ ရေချိုးခြင်းဖြင့် ဖြေလျှော့ ပေးနိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းလျှော်ရင် မအိပ်ခင်မှာ ခြောက်အောင်သုတ်ပြီးမှ အိပ်ပါ။
မိမိကိုယ်အပူချိန်ဟာ နေ့ခင်းဖက်မှာထက် လျှော့ကျနေတာကို သတိပြုပါ။
ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးစမှာ ချွေးပေါက်လေးတွေ ကျယ်နေတဲ့အတွက် ချက်ခြင်းရေတန်းမချိုးပါနဲ့။ မိနစ် ၃၀ခန့် ဆောင့်ပြီး ကိုယ်အပူချိန်လျှော့ကျ သွားကာ ချွေးပေါက်တွေ ပြန်ကျဉ်းသွားတဲ့ အတွက် အဲဒီ အချိန်မှာ ရေချိုးပါ။ ညဖက် အတော်နောက်ကျ ရင်တော့ ရေနွေးနဲ့ ချိုးပါ။
Originally published at - http://health.thithtoolwin.com/2016/05/blog-post_16.html
Posted by Te Tee at 1:14 AM